Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): ၂ဝ၁၅ခုနှစ်အတွက် အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ချီးမြှင့်တဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သူရသတ္တိနှင့်ပြည့်စုံသော အမျိုးသမီးများဆု
၂ဝ၁၅ခုနှစ်အတွက် အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ချီးမြှင့်တဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သူရသတ္တိနှင့်ပြည့်စုံသော အမျိုးသမီးများဆု
at 3/06/2015 10:51:00 AM
၂ဝ၁၅ခုနှစ်အတွက် အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ချီးမြှင့်တဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သူရသတ္တိနှင့်ပြည့်စုံသော အမျိုးသမီးများဆုအတွက် မမေစပယ်ဖြူ ရွေးချယ်ခံရခြင်းအပေါ် ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ဘာကြောင့် စိတ်လှုပ်ရှား မိကြတာပါလဲ? သူဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျား/မ တန်းတူအခွင့်အရေးရရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာ ထူးချွန်ပြောင်မြောက်စွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသူတစ်ဦးပါ။ Gender Equality Networkရဲ့ ညွန်ကြားရေးမှူးတစ်ယောက်အနေနဲ့ရော Kachin Peace Network နဲ့ Kachin Women Peace Network တို့ရဲ့ တွဲဖက် တည်ထောင်သူအဖြစ်နဲ့ ရော သူဟာ အမျိုးသမီးများနဲ့ လူနည်းစုများအပေါ် ခွဲခြားနှိမ့်ချဆက်ဆံမှု ပပျောက်ရေး နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေး တို့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သိမြင်လာနိုင်ဖို့ စတာတွေကို အခြား မြောက်များလှစွာသော လူမှုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ အတူယှဉ်တွဲပြီး ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။
Why are we so excited about May Sabe Phyu being selected asa2015 Secretary of State’s International Women of Courage Award recipient? May Sabe Phyu isachampion of gender equality, peace, and human rights in Myanmar. As director of the Gender Equality Network and co-founder of the Kachin Peace Network and Kachin Women Peace Network, May Sabe Phyu is working in collaboration with many civil society leaders to end discrimination against women and all minorities and promote peace and reconciliation in Myanmar.
MYEN NI HTE GASAT HPANG AI LABAU KADUN
ဗိုလ်ချုပ် ဂွမ်မော် နှင့် ဧရာဝတီ အင်တာဗျူးမှ ကော...
Make in china not bad
People's Liberation Army conducted military excerc...
Lee Kuan Yew, Founding Father of Singapore, Dies a...
Myanmar Border Bombing
နှစ်ပေါင်၆၀လုံးလုံး တိုင်းရင်းသားတွေကို ထိုးစစ်ဆင်...
( ရွေးချယ်စရာက ဒီလမ်းပဲရှိတယ် )
Statement by the Kachin Independence Organization ...
တိုင်းရင်းသားတွေကို တိုက်ခိုက်တဲ့ကိစ္စမှာတော့ တပ်မေ...
Remarks at the International Women of Courage Cere...
အစိုးရယန္တရား အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်နေ ( Only...
US Navy Kachin
ga Shagawnp hte sumla
Ngai lama wa sut du sahti kumi rai wa yang galaw m...
အစိုးရကသာ နိုင်ငံရေးကစားနေတာ ဖြစ်
FUA is the only one who can stop them
၂ဝ၁၅ခုနှစ်အတွက် အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ချီ...
Kumudra's post.Kumudra added4new photos.မြီု့တော...
စည်းကမ်းရှိတဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ကျင့်သုံးမယ်ဆိုတဲ...
Thugs rule the country.ရတနာပုံတက္ကသိုလ်မှအသက်အငယ်ဆု...
နိုင်ငံတကာ အမျိုးသမီးသတ္တိ မမေစပယ်ဖြူ ချီးမြှင့်ခံရ...
US Honors Kachin Activist with Prestigious Women o...
Why Myanmar used such excessive military, police f...
သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားများ တောင်းဆိုသည့် ၁၁ ချက်ကို...
ပညာရေး ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု လှုပ်ရှားမှု ကုို ထောက်ခ...
Today, Celebrated Farmer's day in Hugawng valley, ...
“အရိုးဆုံးက အဆန်းဆုံးလို့ လူတွေပြောလေ့ရှိကြပါတယ်။ ...
Mung Shawa Ni Shawng Dawdan Nna N'dau Ra Ai